Best Free iMovie Nhọrọ maka Windows | Nzukọ mkpanaaka
Nhọrọ iMovie kacha mma maka Windows
Ignacio Sala | 26/10/2021 12:00 | Sistemụ arụmọrụ, Windows
Anyị erutela ebe, mgbe anyị na-edezi vidiyo anyị na-eji ekwentị anyị na-edekọ, ọ na-akawanye mma na ngwa ngwa site na ekwentị anyị ekele maka ngwaọrụ ala dị iche iche nke ndị na-emepụta na-enye anyị. Agbanyeghị, mgbe ị na-esonye vidiyo na mgbakwunye mmetụta anyị ga-amalite ngwa ndị ọzọ.
Ọ bụ ezie na Apple na-eme ka ndị ahịa ya niile dị iMovie, onye nchịkọta akụkọ vidiyo zuru oke dị maka n'efu maka iOS na macOS, na gam akporo, dịka na Windows, anyị enweghị ngwa na-ewu ewu maka ya. Ọ bụrụ na ị na-achọ a free ọzọ ka iMovie maka Windows, M na-agba gị ka ị na-agụ.
1 Gịnị bụ iMovie
4 Pinacle Studio
5 Ihe nkiri X
7 Ngwa ndị ọzọ
7.3 Ọ bụ
Gịnị bụ iMovie
Anyị nwere ike ịkpọ iMovie mgbe nwanne obere (ọ bụghị nzuzu) nke Final Cut Pro, otu n'ime ndị editọ vidiyo ọkachamara na-ejikarị na ụlọ ọrụ na, dị ka iMovie, Ọ bụ naanị maka Apple ecosystem.
Final Cut Pro dị naanị maka macOS (Enweghị version maka iOS n'oge nke na-ebipụta isiokwu a ọ bụ ezie na ọ bụ kepu kepu kepu kepu kepu ke ini iso).
iMovie na-enye anyị ngwaọrụ ndị dị mkpa iji dezie vidiyo anyị na nye ha aka ọkara ọkachamara aka. Ngwa ahụ na-enye anyị usoro ndebiri anyị nwere ike iji mepụta vidiyo n'ime sekọnd ole na ole, ndebiri gụnyere egwu na mmetụta.
Na mgbakwunye, ọ na-enye anyị ohere na-arụ ọrụ na akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ / acha anụnụ anụnụ, gosi vidiyo nke abụọ na windo na-ese n'elu mmiri, gbanwee elekwasị anya nke vidiyo ndị e dekọrọ na ụdị sinima dị na iPhone 13 ...
Ọ bụrụ na ị na-arụ ọrụ na iMovie, ị maara ngwa na ị maara ihe ọ bụ ike nke. Video editọ maka Windows, e nwere ọtụtụ, Otú ọ dị Ọtụtụ n'ime ha enweghị onwe ha, ọ bụ ezie na anyị nwere ike ịhụ ụfọdụ oghe isi nhọrọ nke ga-ekwe ka anyị dochie iMovie enweghị nsogbu ọ bụla.
Ọzọ anyị na-egosi gị kacha mma uzo ozo ka iMovie maka Windows. N'ịbụ ndị ọzọ na iMovie, anyị ga-egosi gị ngwa na-enye anyị ihe fọrọ nke nta ka otu ọrụ na-enweghị na-abanye ọkachamara ngwaọrụ dị ka. Adobe Premiere, VEGAS Pro (nke a na-akpọbu Sony Vegas), Onye njikwa PowerDirector na ihe ndị dị ka onye ọnụahịa ya si n'akpa nke ọtụtụ ndị ọrụ.
Anyị na-eji ngwa nke kacha amasị anyị, na-amalite nchịkọta a. isi mmalite na ngwa efu kpamkpam Kedu ka ọ dị Shotcut. Ngwa a dị maka Windows, macOS na Linux yana koodu ya dị na GitHub
Agbapụ bụ dakọtara na narị usoro vidiyo na ọdịyo ya mere ọ dịghị achọ usoro mbubata gara aga iji dezie vidiyo. Ọ na-enye anyị usoro iheomume, dị ka iMovie, ọ na-enye anyị ohere gbanwee ọnụego etiti, tinye mmetụta na ntụgharị, tinye ederede ...
Na-akwado mkpebi ruru 4K na ọ na-enye anyị ohere ijide vidiyo site na SDI, HDMI, kamera weebụ, jakị isi okwu, ọ dakọtara na Blackmagic Design SDI na HDMI maka ntinye ntinye na nlele anya ...
The interface na-enye anyị usoro nke panel nke dabara nke ọma ka anyị wee ghara ịhapụ ọrụ mgbe ị na-emejuputa ọrụ anyị chọrọ n'oge ọ bụla, ọ na-egosi anyị ndepụta faịlụ ndị na-adịbeghị anya, obere vidiyo nke vidiyo, ọ dakọtara na ọrụ ịdọrọ na dobe site na onye njikwa faili .. .
Obi abụọ adịghị ya, Shotcut bụ otu n'ime kacha mma ezigbo uzo ozo ka iMovie, ọ bụghị naanị n'ihi na ya nnukwu ọnụ ọgụgụ nke ọrụ, kamakwa n'ihi na ọ bụ kpamkpam free, dị nnọọ ka iMovie.
Ahịa: 9,79 € 7,83 €
Ihe ọzọ na-adọrọ mmasị na iMovie maka Windows bụ VideoPad, ngwa nke, ọ bụ ezie na a na-akwụ ya ụgwọ, bụ otu n'ime ndị nhọrọ kacha mma dị taa iji dochie iMovie.
VideoPad na-enye anyị ohere a iMovie-dị ka onye ọrụ interface, Ebe anyị nwere ike ịgbakwunye egwu ọdịyo na vidiyo anyị chọrọ iji ma mee ka ha na-agagharị na ọrụ ahụ dịka mkpa anyị si dị.
Na-agụnye ihe karịrị 50 mmetụta na mgbanwe Iji nye vidiyo anyị aka ọkachamara, ọ na-enye anyị ohere mbupụ vidiyo ndị emepụtara na usoro 60, ọ dakọtara na vidiyo 3D na ogo 360, ọ dakọtara na ụdị ụdị ọ bụla, ọ na-enye anyị ohere itinye ndepụta okwu. .
Ọ bụrụ na anyị chọrọ ịrụ ọrụ naanị na egwu ọdịyo, anyị nwekwara ike iji VideoPad mee ya, ngwa na-enyekwara anyị ohere ndekọ site na igwe okwu, bubata egwu ọdịyo, tinye mmetụta ụda...
Ozugbo anyị mepụtara vidiyo, anyị nwere ike mbupụ nsonaazụ na DVD, bulite ya ozugbo na YouTube ma ọ bụ Facebook site na ngwa n'onwe ya, bulite ya na ikpo okwu nchekwa igwe ojii (OneDrive, Dropbox, Google Drive…), bupụ faịlụ ahụ n'ụdị dakọtara na iPhone, Android, Windows Phone, PlayStation, Xbox na ọbụlagodi na usoro 4K.
VideoPad, dị ka m kwuru n'elu, adịghị maka nbudata efu. Agbanyeghị, anyị nwere ike ijide ya site na ịkwụ ụgwọ ndenye aha $ 4 kwa ọnwa ma ọ bụ kwụọ ụgwọ $ 29,99 ma ọ bụ $ 49,99 maka ụdị Ụlọ ma ọ bụ Master otu.
Tupu ị kpebie ịzụta ngwa ahụ, anyị nwere ike nwaa ya n'efu site njikọ a.
Site na euro 59,99 anyị nwere ike nweta ụdị nke bụ isi Nkọwapụta Pinnacle, a nchịkọta vidiyo zuru ezu nke na-enye anyị ohere iji ihe ruru egwu egwu 6 na vidiyo rụọ ọrụ n'otu oge, nwere grading dijitalụ (ihe na-enweghị ọtụtụ ngwa nke ụdị a), na-enye anyị ohere itinye okpokolo agba isi ...
Ọ bụghị naanị na ọ na-akwado usoro vidiyo ọ bụla, gụnyere 8K ma na mgbakwunye, ọ na-enye ohere ka anyị dezie 360-ogo videos, tinye video masks, nwere ọgụgụ isi ihe nsochi, kewara ihuenyo ịhụ ikpeazụ n'ihi ka anyị na-edezi video ...
Mgbe ị na-ebupụ vidiyo, anyị nwere ike ime ya na mkpebi 8K kacha elu, ọ na-enye anyị ohere ịdekọ ihuenyo, Multi-igwefoto edezi, kewara ihuenyo video, agba mgbazi, Mepụta DVD ozugbo anyị mepụtara vidiyo ahụ, ọ na-agụnye ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke mmetụta, nzacha na ntụgharị ma jikọta nchịkọta aha zuru ezu.
Ihe nkiri X
Ọzọ na-akpali ngwa na-ọkọnọ dị ka ihe ọzọ iMovie bụ Ihe nkiri X, ngwa anyi nwere ike zụta site na ịkwụ ụgwọ otu oge (Euro 69,99) ma ọ bụ jiri ndenye aha kwa afọ ma ọ bụ nke afọ.
Otu n'ime ihe kacha mma nke ngwa a bụ ngagharị nsochi. Otu njirimara na-ejide mmegharị nke ihe dị na vidiyo ma na-enye gị ohere itinye ihe na-agagharị n'otu na ha.
Ọ na-enye anyị ohere iji keyframes iji chịkwaa akụkụ niile nke ndezi dị ka mmegharị, agba, ọdịiche, egwu ọdịyo na vidiyo.
Ọzọkwa, ọ bụ Dakọtara na ọrụ Foto-na-Foto, na-enye anyị ohere ịgbanwe ọsọ ọsọ nke vidiyo, na ekele maka ntinye aka na Filmstock (akwụ ụgwọ) anyị nwere ọtụtụ puku mmetụta na ntụgharị iji mee ihe na vidiyo anyị ma na-enye nsonaazụ ọkachamara.
Mgbe ị na-ebupụ ọdịnaya, Filmora na-enye anyị ohere mbupụ vidiyo dị ka usoro kachasị ewu ewu dị ka MP4, MOV, Flv, M4V… Ọzọkwa ọkụ na videos ozugbo na a DVD, bulite ha YouTube ma ọ bụ Facebook na mbupụ ha formats dakọtara na ngwaọrụ ọ bụla na ahịa.
Video Studio Pro (ụlọ ọrụ nke Corel, onye kere Corel Draw) bụ otu n'ime ngwa ahụ karịa nke ọma nke anyị nwere n'aka anyị iji dochie iMovie na Windows.
Ọ bụ ezie na ọ bụghị n'efu, Ọ nwere ọnụahịa nke euro 69,99 (Ọ bụrụ na anyị nwere nsụgharị ochie, ọnụahịa na-ebelata site na 20 euro), ọ na-enye anyị ọtụtụ nhọrọ ọkachamara na ha nwere ntakịrị iziga Final Cut Pro na Adobe Premiere na ọnụ ahịa dị ala.
Jiri nyocha ịdọrọ-na dobe imepụta ihe Ọtụtụ narị ihe nzacha, mmetụta, aha, ntụgharị na eseresegụnyere AR akwụkwọ mmado… VideoStudio Pro na-arụ ọrụ nke ukwuu n'ụzọ dị mfe ọbụna ma ọ bụrụ na ị nwere obere ihe ọmụma nke video edezi.
N'ihi ngwa a, anyị nwere ike mgbanwe agba ndụ, gbanwee itule ọcha, wepụ ọkụ na-achọghị, tinye nzacha, tinye ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke mmetụta, na-akwado multi-camera edezi, 360 videos.
Ọ naghị ekwe gbanwee usoro playback, tinye mmetụta animation ma na-enye anyị ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ndebiri iji mepụta vidiyo ngwa ngwa na ngwa ngwa, vidiyo na-agụnye egwu.
Ngwa ndị m kwuru n'elu na-arụ ọrụ nke ọma dị ka ndị ọzọ na iMovie na Windows. Ka o sina dị, ma ọ bụrụ na ị na-adịghị mkpa a zuru ezu ngwa dezie gị videos na a isi ụzọ dị ka ịcha ha, wepụ ihe ọdịyo, ịtụgharị ya na usoro ndị ọzọ, ị nwere ike iji ngwa ndị a, ngwa na-enye anyị ohere ịkwalite omume na vidiyo anyị, ọ bụghị dezie ha site na ịgbakwunye mmetụta, egwu, egwu na ndị ọzọ.
VirtualDub bụ ihe magburu onwe ya ngwa efu iji belata vidiyo, bụ ebe mepere emepe na n'efu kpamkpam yana dakọtara na ụdị ọ bụla a na-ejikarị na ahịa. Ọ na-enyekwa anyị ohere ịmekọrịta egwu ọdịyo na vidiyo, gbanwee egwu ọdịyo, dezie ha ...
Ọ bụ ezie na VLC mara na ọ bụ otu n'ime ndị kacha mma video na audio Player N'ahịa, ọ bụkwa ngwa dị mma iji budata vidiyo YouTube, iji tọghata vidiyo na usoro ndị ọzọ ...
Ngwa a, dị ka VirtualDub, dị maka gị budata n'efu ọ bụkwa isi iyi mepere emepe.
Ọ bụrụ na ịchọrọ wepụ audio si video, tinye egwu ọdịyo ọhụrụ, tinye ndepụta okwu, nzacha, bee na mado akụkụ nke vidiyo yana hichapụ iberibe ...
Ọ bụ bụ ngwa ị na-achọ, a ngwa ngwa na ebe mepere emepe dịkwa maka Linux na macOS.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Nzukọ Ekwentị » Sistemụ arụmọrụ » Nhọrọ iMovie kacha mma maka Windows
Minecraft, egwuregwu na-akụzi mgbakọ na mwepụ
Otu esi ebudata ma jiri Internet Explorer maka Mac